🥇 kaonty amin'ny fiasan-trosa
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 519
Lahatsary momba ny kaonty amin'ny fampandehanana trosa
Manafatra kaonty amin'ny fampandehanana trosa
Ny fifampiraharahana fampindramam-bola dia voarakitra ao amin'ny lozisialy USU, izay midika fa ny fifampiraharahana indram-bola dia hiseho eo noho eo amin'ny kaonty sy amin'ny antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'ny fampindramam-bola, ao anatin'izany ny famantarana loko, izay omena ao amin'ny rafitra fitantanana kaonty mandeha ho azy mba hiantohana ny fanaraha-maso ny asa rehetra. izany dia mitranga rehefa manefa indram-bola. Ny fandidiana rehetra dia tanterahina tsy misy fandraisana anjaran'ny mpiasa, noho izany ny fankatoavana ny 'compte automatique', izay mahatonga ny fitantanana kaonty tena izy tsy dia mandaitra kokoa, satria ny hafainganam-pandehan'ny asa rehetra dia ampahan'ny iray segondra, tsy ijerena ny habetsaky ny angona ao fanodinana, fa mandaitra fotsiny noho ny fahafenoan'ny angon-drakitra fandrakofana izay hosoratana. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny kaonty mandeha ho azy, ny kajy rehetra dia mandeha ho azy ihany koa, ao anatin'izany ny fanisana ny zanabola sy ny fiakarana ny sazy, ny famerenana amin'ny laoniny ny fandoavam-bola raha toa ka miova ny tahan'ny fifanakalozam-bola vahiny ankehitriny raha toa ka navoaka tao anaty vola vahiny ny trosa, ary ny fifanakalozana indram-bola toy izany atao amin'ny mitovy firenena.
Ny kaonty amin'ny fampandehanana trosa amin'ny vola vahiny dia tanterahina araka ny fitsipika mitovy amin'ny fampindramam-bola mahazatra, saingy, amin'ny fitsipika iray, ny roa tonta dia miombon-kevitra amin'ny ara-dalàna ny fifanakalozana mba hamerina hamerina ny fandoavam-bola raha ny taha-bola ankehitriny ny vola vahiny izay ananan'io fampindramam-bola io dia navoaka fanovana, raha toa ka miovaova be ny vola vahiny. Marihina fa ny trosa amin'ny vola vahiny, raha fotoana fohy, dia mahasoa kokoa noho ny fampindramambola amin'ny volam-pirenena satria tsy misy fiovan'ny tahan'ny fifanakalozam-bola vahiny dia mitaky fandoavana ambany kokoa noho ny amin'ny tranga. ny fampindramam-bola amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany amin'ny vola eo an-toerana. Ny fikirakirana ny kaonty amin'ny fampandehanana trosa dia mizara ho azy ny indram-bola ‘vahiny’ amin'ny karazany, izay nofaritan'ny tanjon'ny fampindramam-bola vahiny, ho an'ireo mpampindram-bola, fifanarahana ary mitarika tsy miankina ny karazan'asa rehetra omena amin'ny trosa fanompoana amin'ny vola vahiny. Ny adidiny dia misy ny fanaraha-maso ny fizarana marina ny loharanom-bola, ny fanatanterahana adidy ara-potoana azy ireo, ary ny fanarahana ny fepetra takian'ny lalàna mifanakalo.
Ny fikirakirana ny kaonty amin'ny fampandehanana trosa amin'ny vola vahiny dia handinika ho azy ny fahasamihafana eo amin'ny sandan'ny zanabola, ny fahasamihafana eo amin'ny sandan'ny fandoavana ny trosa voalohany amin'ny datin'ny fandoavam-bola, araka ny fandaharam-potoana voatondro ho azy ireo, izay koa namboarina tsy miankina amin'ny fikirakirana. Ny fanaraha-maso ny vola vahiny, ny marimarina kokoa, ny fanaraha-maso ny tahan'ny ankehitriny, ny rafitry ny kaonty mandeha ho azy dia mandeha ho azy ary, raha miovaova be izy ireo, dia manao asa avy hatrany mba hamerenana ny fandoavam-bola arakaraka ny tahan'ny vaovao, hampahafantarana ireo mpanjifa izany ho azy ireo amin'ireo olona mifandray aminy izay aseho amin'ny tahiry, raha apetraka amin'ny andrim-bola ny rindrambaiko.
Ny kaonty amin'ny asa amin'ny vola vahiny dia tanterahina rehefa manome vola indram-bola, mandritra ny asa famerenam-bola manaraka na rehefa averina izy ireo. Mba hikajiana ny fifanakalozana rehetra dia voasoratra ao amin'ny fisoratana anarana elektronika izy ireo satria ny programa dia mitazona fifehezana henjana ny loharanon-karena ara-bola, manamboatra endrika manokana izay mirakitra ny fifanakalozana, izay natao nandritra ny vanim-potoana nitaterana niaraka tamin'ny antsipiriany amin'ny antsipirihany tsirairay avy, nanamboatra ny daty, ny fototra , mpiara-miasa, ary ny isan'ny tompon'andraikitra amin'ny asa.
Ny fitahirizana loharanom-bola, ny tena manan-danja indrindra dia ny fotoana sy ny ara-bola, dia ny asan'ny programa, noho izany, manamora ny fomba rehetra araka izay tratra ary, amin'izany, manafaingana azy ireo, mamela andraikitra iray ihany ny mpiasa - fidirana data, voalohany ary ny ankehitriny. Mba hanoratana ny vaovao voaray avy amin'ny mpampiasa, ny fahamendrehana sy ny fahombiazany, omena diary elektronika tsirairay, izay anaovan'ny mpiasa hafatra momba ny hetsika nataon'izy ireo tamin'ny fanatanterahana ny asa. Miorina amin'ity fampahalalana ity, ny rafitra mandeha ho azy dia mamerina manisa ireo tondro izay mamaritra ny toetran'ny fizotran'ny asa ankehitriny. Miorina amin'ireo mari-pamantarana nohavaozina, ny fanapaha-kevitra momba ny fitantanana dia raisina hanohy ny asany amin'ny fomba mitovy na hanitsiana izay dingana rehetra raha toa ka ampy tsara ny fanivahana ilay mari-pamantarana tena izy amin'ilay nokasaina. Noho izany, zava-dehibe ny asan'ny mpiasa, izay tombanan'ny rafitra fitantanam-bola rehefa manisa ny karaman'ny mpiasa amin'ny faran'ny fotoana anaovana tatitra.
Ny programa dia manao kajy ny tambin-karama isam-bolana an'ny mpiasa tsirairay, amin'ny fandinihana ny kalitaon'ny fampahalalana napetraka ao anaty vatan'ny asa, ka ny mpiasa dia liana amin'ny fanampiana ara-potoana ny angon-drakitra sy ny fahamendrehany. Ny fanaraha-maso ny fampahalalana avy amin'ny mpampiasa dia ataon'ny mpitantana sy ny rafitra mihitsy, mandika ireo asa ireo, satria manana fomba fanombanana samihafa izy ireo, ka mifameno. Ny mpitantana dia manamarina ireo hazo ataon'ny mpiasa raha mifanaraka amin'ny toe-draharaha misy ankehitriny, izay ampiasain'izy ireo ny asa fanaraha-maso, izay mampiseho izay tena fampahalalana nampiana ny rafitra hatramin'ny nanamarinana farany ary, noho izany, manafaingana izany. Ny rafi-kaonty momba ny kaontim-bola dia mitazona ny fifehezana ireo tondro, mametraka subordination eo anelanelany, izay manilika ireo lesoka.
Ny programa fitantanana kaontim-bola amin'ny kaonty dia miteraka tahiry maromaro, ao anatin'izany ny tsipika vokatra, ny CRM eo anilan'ny mpanjifa, ny angon-drakitra momba ny trosa, ny angon-drakitra iray, ny tobin'ny mpampiasa ary ny angon-drakitra mpiara-miasa. CRM dia misy ny tantaran'ny fifandraisan'ny mpanjifa tsirairay avy amin'ny fotoana fisoratana anarana, ao anatin'izany ny antso, fivoriana, mailaka, lahatsoratra an-gazety, antontan-taratasy ary sary. Ny tahiry fampindramam-bola dia misy ny tantaran'ny fampindramam-bola, ao anatin'izany ny datin'ny famoahana, ny vola, ny zanabola, ny fandaharam-potoana famerenam-bola, ny fampandoavana onitra, ny fananganana trosa ary ny famerenam-bola. Ny fitantanana kaonty amin'ny kaontim-bola dia tsy hitaky fotoana firy satria ny rindranasa tsirairay dia manana ny toerany sy ny lokony amin'izany, amin'izay ianao afaka manara-maso maso ny satan'izy ireo ankehitriny nefa tsy manokatra antontan-taratasy. Manohana manokana ny mari-pamantarana loko sy satan'ny rafitra ny rafitra mba hitsitsiana ny fotoanan'ny mpampiasa. Ny loko dia mampiseho ny ambaratongan'ny fanatanterahana ny vokatra tadiavina.
Ny rafi-kaontin'ny kaontim-bola dia manohana manokana ny fampiraisana ireo endrika elektronika. Izy ireo dia manana endrika famenoana mitovy, fizarana fampahalalana mitovy ary fitaovam-pitantanana. Ny programa dia manolotra famolavolana manokana ny toeram-piasan'ny mpampiasa - safidy maoderina maherin'ny 50 an'ny interface ary azo fidina amin'ny alàlan'ny fanodinana. Ny mpampiasa dia manana logins manokana sy teny miafina fiarovana ho azy ireo, izay manome endrika elektronika manokana ho an'ny asa sy ny habetsaky ny fampahalalana momba ny serivisy. Ny logins dia mamorona faritra iasana misaraka - faritra iandraiketan'ny tena manokana, izay misy ny angon-drakitry ny mpampiasa rehetra voamarika amin'ny fidirana an-tserasera izay mety rehefa mitady vaovao diso. Ny interface multi-mpampiasa dia manampy amin'ny famahana ny olan'ny fizarana rehefa mitarika asa miaraka ny mpampiasa satria nofoanana ny fifanolanana amin'ny fitehirizana angona. Ny rafitra dia mamokatra tsy miankina amin'ny fizotran'ny antontan-taratasy rehetra ankehitriny, ao anatin'izany ny fanambarana ara-bola, voatery ho an'ny mpandrindra, fonosana antontan-taratasy feno hahazoana trosa.
Ny programa dia mitazona firaketana statistika mitohy momba ny tondro fampisehoana rehetra, izay ahafahana manao drafitra mahomby amin'ny vanim-potoana ho avy, haminavina ny valiny. Miorina amin'ny kaonty statistika, ny karazana hetsika rehetra dia voadinika, ao anatin'izany ny fanombanana ny fahombiazan'ny mpiasa, ny hetsiky ny mpanjifa ary ny famokarana ireo tranonkala marketing. Ny famakafakana ireo karazana hetsika rehetra, omena amin'ny faran'ny vanim-potoana fanaovana tatitra tsirairay, dia ahafahana manitsy ny fizotrany ara-potoana ary manatsara ny fifanakalozana ara-bola. Ny programa dia manohana ny fifandraisana mahomby - anatiny sy ivelany, ao amin'ny windows pop-up voalohany, amin'ny fifandraisana elektronika faharoa - mailaka, SMS, Viber, ary antso am-peo.